Tidcan Cascade - Tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo si aad u saxdo | Bezzia
Tilmaamaha Cascade: Soo ogow sida loo sameeyo si fudud!
Susana godoy | 01/09/2021 12:00 | Quruxda
Miyaad jeceshahay timaha tidcan ee biyo -dhaca? Xaqiiqdii marar badan ayaad aragtay, laakiin si kasta oo aad u xidhato, waligeed isku mid uma eka. Hagaag, maanta waad ogaan doontaa sababta oo ah waxaan ku tusaynaa tusaalooyin wax ku ool ah oo ay tahay inaad tixgeliso. Waxaad ugu dambayn heli doontaa timahaaga aad rabto!
Braids had iyo jeer waa jilayaasha timaha ugu fiican, maxaa yeelay in kasta oo aqlabiyaddu aad u fudud tahay, haddana weligood kama baxaan qaabkii. Tani waxay ka dhigan tahay inaan siyaalo kala duwan u xiran karno mar walbana qaab ahaan. Ma rabtaa inaad ku sharadato iyaga? Markaa ha seegin wax kasta oo soo socda.
1 Waa maxay tidicid biyo -dhac ah
2 Sida loo sameeyo tillaabo tidcan tallaabo -tallaabo
2.1 Timaha si fiican u caday
2.2 Qaybinta timaha koowaad
2.3 Samee tidcan biyo -dhaca
3 Sida loo dhammeeyo dalool -biyoodka
Waa maxay tidicid biyo -dhac ah
Sidaan soo sheegnay, waxaa jira noocyo badan oo tidcan oo aan heli karno. Laakiin dhammaantood, waxaa jira mid soo jiidasho badan leh waana kaabashka cascade. Dabcan, sida magacu tilmaamayo, Waa timo timo oo ka bilaabmaysa aagga sare oo hoos u dhacaya had iyo jeer ma aha mid toosan. Intaa waxaa dheer, waxay ka tagtaa nooc ka mid ah jeexjeexyada wanaagsan ee timaha timaha. Guud ahaan, badiyaa waa badh la soo ururiyey, oo had iyo jeer abuuraya qaab aad u hal-abuur leh oo la jaanqaadi doona dhacdooyinka kala duwan.
Sida loo sameeyo tillaabo tidcan tallaabo -tallaabo
Timaha si fiican u caday
Mid ka mid ah tillaabooyinka asaasiga ah markaan sameyneyno timo -qurxinta waa taas timuhu waa inay si buuxda u liqaan. Sidaa darteed, ma jirto wax la mid ah sida loo shanleeyo ama si fiican loo cadayo. Marka hore waxaad kala furfuri kartaa darafyadiisa maxaa yeelay waxaan hore u ogeyn in guntimaha ay mararka qaarkood weynaadaan. Markaa, mar kasta oo aad qaadato xadhko kasta si aad u samaysato, waxaad mar kale shanlayn doontaa.
Qaybinta timaha koowaad
Hadda waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa samaynta qaybinta taas oo kor u qaadi doonta tidcinteena cascade. Kiiskan waxaynu ka soo qaadannaa xadhka macbudka qaybtiisa sare oo waxaan u kala qaadaynaa saddex qaybood. Taasi waa, waxaan ku bilaabi doonnaa saddex xargo si aan u sameysanno tidcin. Waxaad had iyo jeer dooran kartaa dhererkeeda, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo xagga sare si aad u eegto mid ballaaran. Xariggu ma aha inuu noqdo mid aad u cufan, had iyo jeer way fiican tahay inaad u fiicnaato shaqo summad badan leh. Xadhigga ballaadhan, baaxadda ballaadhani sidoo kale waxay noqon doontaa
Samee tidcan biyo -dhaca
Waxaa fiican inaad ku aragtid fiidiyaha iyo qaab wax ku ool ah laakiin waxaan kuu sheegi doonaa kuwa soo socda. Saddexda xadhig ama qeybaha aad haysato, waxaad u dhaafi doontaa xarigga sare xagga dhexe. Hadda waa marinka xarigga hoose oo isna u jihaysan doona dhinaca dhexe, oo daboolaya xarigga aan hore ugu haysannay meeshaas. Waxaan dib ugu celinnaa xarigga kore xagga dhexe markaan haysanno, waxaan soo qabsannaa timo cusub oo sare anaguna sidoo kale waxaan u qaadanaynaa qaybta dhexe. Marka markaan mar labaad ku darno midka ugu sarreeya, waxaan ka tagi doonnaa kan hoose oo aan ku soo lifaaqnay waxaan kaloo qaadan doonnaa xarig cusub aaggan. Haa, waa inaad ku dartaa xargo cusub oo u gudub dhinaca dhexe.
Sida loo dhammeeyo dalool -biyoodka
Tan ugu caansan waa taas tidicidda biyo -dhaca ayaa gaadha badhtamaha madaxa aagga dambe. Yacnii, dhinac uun baannu ku xidhnaan doonnaa Laakiin waa run inaad adigu dooran karto inaad dhammaysato madaxa oo dhan oo u oggolow nus-ururiyaha inuu joogo. Waa inaad si fiican u hagaajisaa tidcan si uusan u kala go'in ama haddii ay tahay timo -jarka xaflad, wax la mid ah sameynta kor -u -kaca laga bilaabo qeybtaan. Waxay u muuqataa in fikradaha mar walba aad u kala duwan yihiin iyadoo ku xiran baahidaada. Miyaad samayn doontaa tidcinta biyo -dhaca?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Tilmaamaha Cascade: Soo ogow sida loo sameeyo si fudud!
Guriga bisadaha lagu sameeyo oo xayawaankaagu jecel yahay